I-WARANG-LODGE, endaweni eyihektha elilodwa - I-Airbnb
I-WARANG-LODGE, endaweni eyihektha elilodwa
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Eric
I-LODGE itholakala imizuzu emi-5 ukusuka ogwini, edolobhaneni lase-WARANG, ihora elingu-1 ukusuka e-DAKAR ngomgwaqo omkhulu, imizuzu engama-30 ukusuka esikhumulweni sezindiza futhi eduze nendawo yezivakashi yase-SALY.
Endaweni eyihekthare elingu-1 endaweni yepharadesi, indawo yokulala, indawo yokuthula yeqiniso, inamagumbi okulala anomoya opholile angu-5.
Inendawo yokuhlala enhle ezungeze ichibi lokubhukuda (igumbi lokuphumula, iqhugwane lotshani, izihlalo zedekhi, ulwandle olunesihlabathi), indawo yokubuka enombono wehlathi kanye neklabhu yasebusuku engaphansi.
Itholakala endaweni enokuthula nokunethezeka, I-LODGE iyindawo ekahle kakhulu yemindeni, amaqembu abangane nepharadesi lezingane.
Sinethuba lokwandisa umthamo wethu kuze kufike kubantu abangu-16 ngokufaka imibhede endaweni eyodwa.
Isesimweni esiphelele futhi igcinwa isesimweni esihle kakhulu nsuku zonke.
Indawo yokuhlala evulekile - i-Wifi - i-Canal + - indawo yokubhukuda enolwandle olunesihlabathi - izihlalo - i-mullet - i-watchtower - i-nightclub yangasese - i-barbecue - i-bowling alley nezitsha.
Ikamelo ngalinye, elihlotshiswe ngokucophelela, linegumbi lokugezela elinethezekile elineshawa engena endlini nendawo enhle yokugcina izinto (igumbi lokugqoka namakhabethe alula, elincane eliphephile). Izinto zombhede zinekhwalithi enhle kakhulu. Amanethiwekhi omiyane afakwe emafasiteleni ase-France namafasitela ase-France.
Izindlwana ezingu-2 zilahlwe nguwe.
I-lodge inekhishi elikhulu elinakho konke (izitsha zekhwalithi, isitofu segesi, amafriji amabili/ama-freezers, indawo yokosa enkulu, i-microwave, umshini wokwenza ikhofi, umshini wokwenza ikhofi we-espresso, umshini wokuwasha, njll...).
I-lodge inomshini omkhulu wokucindezela onamanzi angu-4000 liters, okuvumela ukuba uhlale unamanzi anomfutho omuhle uma kunqunywa amanzi.
Sizoba kuwe kukho konke ukuhlala kwakho ukuze sikwenze kube nobungane futhi kujabulise ngangokunokwenzeka.
Sizokuqondisa ekuhambeni kwakho okuncane edolobhaneni. Sinelogi esizoyenza itholakale kuwe mahhala (ngaphandle kukaphethiloli), ohambweni kuphela endaweni yase-Nianing, Warang, M'Bour.
Okufakiwe endaweni yokuqasha :
Ukugcinwa okuphelele kwe-lodge nsuku zonke (amakamelo, indawo yokubhukuda, izindawo zokuhlala, ingadi, njll...)
Amanzi anikezwa yinkampani
yamanzi i-SENEAU Ukupheka igesi
Amathawula asegumbini lokugezela (50cm×100cm), ilineni yombhede nezingubo zokulala
Iphepha lasethoyilethi, uketshezi lokugeza izitsha
i-TV yesikrini seflat cm enesiteshi + ukubhalisa kokuphunyuka
sono Asinikezi amathawula okugeza echibini lokubhukuda.
Nikeza izindleko ezengeziwe zikagesi:
Ukufunda komuntu oyedwa kuzothathwa lapho ufika nalapho uhamba (Izindwangu zokusetshenziswa: 150 f cfa per kwh, noma € Atlan3).
Ukudla e-lodge :
Sinikeza umpheki oqeqeshiwe ozokwenza ukuthenga kwakho futhi alungiselele ukudla kwakho kwasekuseni, ukudla kwasemini kanye nesidlo sakusihlwa esithathwe e-lodge. Uzokwenza isevisi yetafula, izitsha nokuhlanza ekhishini.
Sikuqinisekisa ngokudla kwekhwalithi okwenziwe ngemikhiqizo yasendaweni emisha ekhethwe ngumpheki (inyama, inhlanzi, i-shellfish, imifino, njll...).
€ 15 ngosuku (10,000 francs).
Ukudluliselwa kwesikhumulo sezindiza/i-lodge:
Okwabantu abangezona izakhamuzi e-Senezuela, uma ufisa, singakwazi ukuphatha ukudluliselwa kwakho kwesikhumulo sezindiza/i-lodge.
Izihlalo zabagibeli zetekisi ezingu-6 (uhambo oluyindilinga lwama-Euro angu-60).
Ibhasi elincane izihlalo zabagibeli ezingu-11 (uhambo oluyindilinga lama-Euro angu-100).
Ibhasi elincane izihlalo zomshayeli ezingu-14 (uhambo oluyindilinga lwama-Euro angu-150).
Ohambweni lwakho esifundeni, singakuthinta nabashayeli/abaqondisi abafanelekayo, abanezimoto ezisesimweni esihle futhi abasebenzisa amanani aguquguqukayo.
Sizokuhamba nawe futhi sikuqondise ekuhambeni kwakho okuncane edolobhaneni lase-WARANG, iya ebhishi, njll... Ngalokhu, sine-logan esizoyenza itholakale mahhala (ngaphandle kogesi), kuphela endaweni ezungezile i-Warang, i-Nianing ne-M 'our.
Amanzi anikezwa yinka…